2007 Azafady mba alefaso ireo mpamoaka vaovao | Martech Zone
Iray amin'ireo mialoha ho an'ny 2007 dia tonian-dahatsoratra vaovao ho an'ny tranonkala miaraka amina fampiasa 'edit in place'. Tiako ny hevitra fanovana eo amin'ny toerany… fa tsy miditra amin'ny alàlan'ny fitantanana misaraka tanteraka, ny mpampiasa iray dia afaka manomboka manoratra fotsiny sy manangana ny HTML ny fomba irin'izy ireo.
Ireto misy sasany feno fidirana bilaogy amin'ny Edit in Place avy amin'i Joseph Scott. Raha tsy programmer ianao ary manontany tena ianao hoe inona no lazaiko, ity misy pejy ohatra iray. Tsara fanahy i Joseph mba hametrahana ny asany rehetra alaina.
Manantena olona iray mamorona tonian-dahatsoratra vaovao tanteraka aho Tsy toy ny ny tonian-dahatsoratry ny Microsoft Word izay toa mipoitra na aiza na aiza amin'ny Internet. Toa na i Microsoft aza dia manome onitra an'io miaraka amin'ny Office 2007 miaraka amin'ny interface 'Ribbon' vaovao. Ratsy io ao amin'ny Birao ankehitriny (mety misy mahazo miasa ve ny bala?), Ankehitriny tsy maintsy hitantsika manerana ny tranonkala ve izany? Na i Google Docs dia mampiasa tonian-dahatsoratra mitovy amin'izany (ary tsy mandeha koa ny bala any).
Mila paradigma vaovao isika amin'ny fanitsiana antontan-taratasy, fampisehoana, html, mailaka sns. Ny fanovana ao amin'ny Toerana no mety ho fanombohana an'ity paradigma ity. Namaky teny nalaina tao amin'ny Mavericks any am-piasana: Maninona no mandresy ny saina voalohany indrindra amin'ny orinasa amin'ity faran'ny herinandro ity avy amin'ny ING Direct's Arkidi Kuhlmann:
Raha manao zavatra araka ny fanaon'ny olon-drehetra azy ianao, maninona no heverinao fa hanao zavatra tsara kokoa ianao?
Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, tranokala, bilaogy sns ary ny fifandraisana amin'ny mailaka azy ireo dia efa misy ny endrika voafaritra amin'ny endrika asan'izy ireo. Alao an-tsaina ny fampiharana izay ahafahan'ny mpitantana marika an'ny orinasa mametaka ny takelaka misy azy ao anaty rindranasa iray ary "manova amin'ny toerany" ve ny sisa ?! Tsy ho nofinofy ve izany?
Ny fanovana dia hidina amin'ny lahatsoratra sy sary… mety ho voafetra tanteraka ny isan'ny bokotra sy ny menus. Ho an'ny sasany, angamba lahatsoratra tsotra fotsiny io hoe avela hiditra ny olon-kafa fa tsy misy zavatra hafa!
Iza no vonona hanangana azy?
Tags: CMSfitantanana votoatyafa-po ny rafitra fitantananaOvay-in-toeranampamoaka lahatsoratratonian-dahatsoratra htmltonian'ny lahatsoratra
Mividy sy mivarotra karatra fanomezana amin'ny Internet!